HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulUrurka Isboortiga Qaranka ee Duullimaadyada Diyaaradaha ee Magaalada Istanbul
Ururka Isboortiga Qaranka ee Duullimaadyada Diyaaradaha ee Magaalada Istanbul
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY, taraamka 0
qaban qaabada mac macdanta ee adeegyada metro ee istanbul
Diyaar garoowga Ciyaaraha Qaranka ee Duulimaadka mitidka ee magaalada Istanbul. IMM, kaas oo lagu ciyaari doonaa habeenka jimcaha ee Turkey - kulan caalami ah Albania ahayd wakhti kordhin saacadaha khadadka dhulka hoostiisa qaar ka mid ah.
Istanbul degmada Metropolitan (IMM) waqti in khadadka Tareenada Istanbul Metro ku shaqeeya by xulufadeeda waa saacadood Friday October 11 21: xnumx't oo lagu ciyaari doonaa Turkey - Albania la dib loo eegay sabab u ah kulanka caalamka.
Sababta oo ah ciyaarta kubbadda cagta M3 Kirazli-Olympic-Basaksehir, T1 Kabatas-Bagcilar, T4 Topkapi-Masjid-i Selam iyo Khadadka F1 Taksim-Kabatas ayaa la kordhiyay illaa 01: 30 saacadood.
M1A Yenikapı-Atatürk Airport, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy iyo M6 Levent-Boğaç ayaa sii socon doonaÜÜÜğğğğğ
Abaabulidda OEF imtixaanka gawaarida madaarka ee Izmir 02 / 06 / 2017 Imtixaanka OEF ee Isgaadhsiinta İzmir Metro: Isgaadhsiinta İzmir, 03 - 04 Juun 2017 ayaa lagu qaban doonaa Iskuulada Waxbarashada Furan (OEF) Sabtiyada iyo Axadda sababtoo ah wakhtiyada duulimaadka ee wakhtiga la qorsheeyey. Isniinta Metro, 03 Sabtidii Juun, 06.00-06.30 saacadaha gaadiidka inta u dhaxaysa 10 daqiiqado, saacadaha 06.30-20.00, saacadaha 5, saacadaha 20.00-00.20 ayaa la qaban doonaa daqiiqado kasta 10. 04 Axadda, duulimaadka ayaa ka dhici doona 06.00-07.00 iyo 10 hal daqiiqo, 07.00-19.30 daqiiqad kasta iyo 6-19.30 daqiiqad kasta.
Diyaargarowga Ramadaanta ee Duullimaadyada Diyaaradaha ee Magaalada Istanbul 06 / 05 / 2019 Magaalada Istanbul ee caasimadda, 'bisha Ramadaanka' sababtoo ah isbeddelka xilligii tareenka ayaa la beddelay. Dhamaan xarumaha tareenada, saacadaha furitaanka waxaa loo kordhiyay 01.00, halka Jimcaha iyo Sabtida saacadaha furitaanka loo kordhiyay 02.00. Sida ku cad qoraalka qoraalka ah ee Istanbul Metro; M1A Airport Newkapı-Ataturk inta lagu jiro bisha Ramadaan, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazli-Olimpik-Başakşehir, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 , T6 Topkapı-Mascid-i Selam iyo F1 Taksim-Kabataş ayaa la kordhiyay qorshaha. Fashion, TF4 Maçka-Taşkışla ...
Sannadka Cusub ee loogu talagalay adeegga gawaarida ee Uludağ 28 / 12 / 2016 Sannadka Cusub ee Adeegga Gawaarida ee Uludağ: Adeegga Isgaadhsiinta ee Uludağ Agaasimaha Guud ee Burhan Özgümüş ayaa sheegay in 31 ee Uludağ la siin doono adeegga baabuurta wakhti xaadirka ah ee 08.00 ilaa 02.00 maalinta xigta. Burhan Ozgumus, oo ah maamulaha guud ee shirkadda Bursa Teleferik Inc., ka dib markii la furay xilliga qaboobaha, ayaa kor u kac weyn ku yimid tayada rakaabka, ayuu yidhi. Shaxdani, sanadka cusub wuxuu galayaa shirarka loogu talagalay dadka doonaya in ay samaystaan ​​qorshe gaar ah Sannadka Cusub ee Özgümüş, "31 fiilo wicitaan ee Christmas, 08.00 Diisembar Sabti, maalinta ku xigta adeegga aan joogtada ahayn ee 02.00. Si kastaba ha noqotee, haddii la codsado, waan sii wadi doonaa inaan soo qaadno oo aan ka saarno rakaabka. "
Qorshaha Sanadka Cusub ee Adeegyada Basaska ee Bursa 31 / 12 / 2015 Qorshaha Sanadka Cusub ee Adeegyada basaska ee Bursa: Sida ku xusan xeerka BURULAŞ, adeegyada basaska ee ka shaqeyn doona inta u dhexeysa bisha 12aad ee 31 December iyo 1 January ayaa lagu dhawaaqay. Basasku waxay kaloo shaqeeyaan wakhti dheer sida burcada ee sannadka cusub. HALKAN HALKAN KA BADAN YAHAY YEELASHADA SANADKA SANNADKA BURSAA
Erdogan oo loo qorsheeyay Bursaray 21 / 10 / 2016 Erdogan oo u duulay diyaaradaha Bursaray: Sababtoo ah xidhitaanka Sehreküstü Station si ay u howlgalaan sababtoo ah booqashadii Madaxweyne Erdogan ee berri berri, ayaa qorshe cusub loo sameeyey diyaaradaha. Sida ku qeexan heshiiska; Bursaray Sehreküstü Station 22 ayaa la xirayaa ka dib markii 11.00 Sabti, Oktoobar (Oktoobar). Tareenada ka yimid jihada shaqada iyo jaamacadda ayaa tagi doona xarunta Merinos. Tareenka shidaalka ayaa socon doona inta u dhaxaysa Merino iyo saldhiga Osmangazi. Tareenada ka soo jeeda Kestel ayaa tagi doona xarunta Demirtaşpaşa. Waxaa jiri doona hawlgal bas oo u dhaxeeya saldhigyada Merinos iyo Gökdere. Sababtan awgeed: Rakaabka ka imanaya jihada Shaqaalaha - Jaamacadda oo tagaya saldhig Osmangazi, ka baxso tareenka Merinost una gudbiya tareenka ka soo horjeeda ...
Tallaabooyin dheeri ah oo looga soo horjeedo shilalka IETT Metrobus
Saldhigyada Basaska ee Lagu Kordhiyo Belkıs
Abaabulidda OEF imtixaanka gawaarida madaarka ee Izmir
Diyaargarowga Ramadaanta ee Duullimaadyada Diyaaradaha ee Magaalada Istanbul
Sannadka Cusub ee loogu talagalay adeegga gawaarida ee Uludağ
Qorshaha Sanadka Cusub ee Adeegyada Basaska ee Bursa
Erdogan oo loo qorsheeyay Bursaray
Qorshaha Sanadka Cusub ee Duulimaadka Bursaray
Ururka Bandhiga ee Bursaray
Ramadaanka oo loo qorsheeyay Jadwalka Ferry ee Malatya
Damaashaadka Sacuudiga ee Ololayaasha YHT
Gaadiidka iyo Gaadiidka Gawaarida ee Meelaha Qaranka laga bilaabo Eskisehir Caasimadda